Lapha lapho ungashiya khona imibono ngaleli sayithi, izikebhe, izinjini, ukudoba nezinye izihloko, noma umane nje uthi sawubona futhi usitshele ukuthi uvelaphi. Ngiyacela, akukho kwezepolitiki, amahlaya, noma yini engafanele le sayithi. Kumele Ngena ngemvume uma ufisa ukushiya amazwana.
Kuthunyelwe ngu- Jwb.jw17 Ngo-Wed, 06 / 28 / 2017 - 15: 41
61 / 62 Johnson 3hp ukuvuza
Udinga Usizo ngongoti benu. Bengilokhu ngifuna ukwenza le njini endala, ngithole izinto ezimbalwa kusuka ku-52-54 evinrude manual endala kodwa ayisho lutho ngokwenzekayo ngalokhu .Ngemva kokuyisebenzisa emgqonyeni wamanzi bese ngiyigcina I-sawhorse ngithole isiziba esincane segesi siphume imbobo encane ezansi ngaphansi komkhawulo ovundlile njengengcezu engenhla nje kokungena kwamanzi nokukhipha. Ngabe kufanele iphumele lapha? Futhi ukusebenzisa i-carb yomile ngaphambi kokucisha (ngokwencwajana yakudala) kungakuvimbela lokhu? Ngiyi-newbie enenjini futhi ngidinga usizo ... Futhi ngizama ukuthola ukulanda kwamahhala kwemanuwali ... ngiyabonga j bert
Kuthunyelwe ngu- ttravis Ngo-Wed, 06 / 28 / 2017 - 22: 04
Ekuphenduleni 61 / 62 Johnson 3hp ukuvuza by Jwb.jw17
Uzwakala sengathi amanzi ...
Kuzwakala sengathi amanzi angena emafutheni akho angaphansi aphansi ngokusebenzisa uphawu lwamafutha oluvuza. Ayikho igesi engaphansi kwe-powerhead, kodwa amanzi / amafutha avuleka emuva mhlawumbe abukeka njengegesi. Lezi yizimpawu zenjoloba ezihamba nxazonke ze-driveshaft. Kuvamile ukuthatha indawo...Buka Okuningi
Kuthunyelwe ngu- ttravis Ngo-Wed, 06 / 28 / 2017 - 22: 09
Nasi uhlu lwezingxenye engizi ...
Nasi uhlu lwezingxenye engizihlanganisela i-JW-17 yakho, kufaka phakathi uphawu lwe-driveshaft yamafutha. http://outboard-boat-motor-repair.com/motors/Johnson%203.0%20HP%201961-…
Kuthunyelwe ngu- Jwb.jw17 NgoThu, 06 / 29 / 2017 - 00: 21
Ngiyabonga ttravis. Nginesiqiniseko sokuthi igesi inombala oluhlaza ofanayo nowoyela wami oxubekile negesi inakho futhi ihwamuka ngokushesha ishiye uwoyela oluhlaza okwesibhakabhaka o-2 oluhlaza okwesibhakabhaka. Angikwazanga ukufunda konke okuthunyelwe kwakho ngesizathu esithile esingaziwa ..ungakopisha futhi unamathisele ku-imeyili. Ngikhona Jeremy.w.bert@gmail.com . Ngangisusile isigqoko esingezansi ukuze ngibone ukuthi ngingathola yini umthombo lapho ngiphawula ukuthi bephuma ngaphandle komgwaqo omncane we-hole stbd ngezansi lapho i-shaft ixhuma khona emhlanganweni. Kuthathe ubusuku ukuzobonakalisa. Noma yimiphi imibono? Kucishe kubonakale sengathi ifana nento yokuchichima. Nginayo i-valve futhi ngivale ... Seyenzile lokhu kabili ... Kubonakala sengathi kuhamba kahle ??? Thi-anks ye-backback ...
Kuthunyelwe ngu- ttravis NgoThu, 06 / 29 / 2017 - 09: 07
Angiqiniseki. Kungaba ukuvuza phansi kwe-drivehaft kusuka ekhanda lamandla. Ungadinga ukususa ikhanda lamandla ukuze ubone ukuthi kulapho livela khona. Uma udinga inombolo yengxenye, ngazise, ​​futhi ngizozama ukukutholela yona. Ngisezinhlelweni zokufaka izingxenye zazo zonke izinjini ezindala, kepha izindandatho nezimpawu kuzoza kamuva ngemuva kwezingxenye zokulungisa. Ngicabanga ukuthi umbuzo omkhulu okufanele uzibuze wona ukuthi uvuza kangakanani futhi kufanele ukhathazeke ngawo. Angicabangi ukuthi kulimaza noma yini ukuba nokuvuza okuncane. Ungahle ufune ukubuza abantu ku-iboats.com lapho ungathola khona impendulo engcono.
Kuthunyelwe ngu- Jwb.jw17 NgoThu, 06 / 29 / 2017 - 12: 07
Siyabonga ttravis, egijima ngokwanele ukuze sikhathazeke nge-USCG
Kahle ngithole namhlanje ekuseni ukuthi sekuvele enye igesi. hhayi okuningi kepha kwanele ukubeka isikhunta samafutha emanzini! Sizothatha isikebhe / siye eMission Bay, eSanDiego ukuvakashela abazukulu futhi bangamantongomane kakhulu laphaya nganoma yikuphi ukungcola. Othile ukubika ukuthi ufafaze ushevu wokukhipha izintuthwane ngaphandle kwe-RV yakho lapho phansi ngoba ichimbi elidala elingcolile (isikhukhukazi sodaka) lingadla idlozi elinoshevu !!! Uma uthi "ikhanda lamandla" ngikuthatha lokho, usho ukuthi uqalisa yonke / ithangi legesi nomhlangano wokuthungela? Kubukeka sengathi kuzofanele ngikwenze. Sengiqala ukucabanga ukuthi igesi evala i-valve iyavuza. Njengoba umoya uvaliwe kuthatha isikhashana ukuthi i-vacuum ebangelwa igesi evuzayo ithole umoya owanele ukuvuza. Kungakho kwenzeka njalo emahoreni angama-24 noma ngaphezulu. Angiboni ndawo ngaphandle kwe-carb ebukeka imanzi. Ngabe i-carb inohlelo lokuchichima oludonsela phansi kulowo mgodi? Kungenzeka ukuthi akuveli nje kuphela lapho kuvalwa khona i-valve kodwa ne-valve valve kanye ne-valve yenaliti esitsheni se-float nayo. Ukungcola. Nakanjani ngizokwakha kabusha i-carb futhi ngizothatha isikhundla salolo phawu ongitshele ngalo nami. Angikaze ngisebenze enjini yasolwandle, noma isifo sohlangothi esingu-2, kodwa ngidabule ngempumelelo i-carb eminingi ngempumelelo .. Noma yimaphi amathiphu azothokozelwa .. Ngiyabonga Travis! UJ Bert
Kuthunyelwe ngu- ttravis NgoThu, 06 / 29 / 2017 - 17: 46
Ekuphenduleni Siyabonga ttravis, egijima ngokwanele ukuze sikhathazeke nge-USCG by Jwb.jw17
Inhloko yamandla ilula kalula ...
Inhloko yamandla kulula ukuyisusa. Ngikwenze lokhu kuphrojekthi yami ye-5.5 HP Johnson ongayifunda lapha: http://outboard-boat-motor-repair.com/Johnson/Remove%20Lower%20Unit%20a…
Nginokubhala futhi ku-3 HP Evinrude efana ncamashi nalokho onakho. Ungafunda ngalokhu lapha: http://outboard-boat-motor-repair.com/Evinrude%203%20HP%20Lightwin%20Ou…
Ngizosikisela kokufunda kokubili ngoba i-carb ne-ignition zifana kakhulu.
Zijabulise eCalifornia nabazukulu. Ngizoba seWisconsin eLake Michigan. Nginesixhumanisi salapho futhi: https://www.youtube.com/watch?v=xC7QiRaJTbI&t=55s
Ngidinga i-valve entsha ye-shutoff ye-3 HP Evinrude yami. Lapho ngiyithola, ngizokwazisa.
Kuthunyelwe ngu- Jwb.jw17 NgoThu, 06 / 29 / 2017 - 22: 45
Ekuphenduleni Inhloko yamandla ilula kalula ... by ttravis
Siyabonga. Ngicabanga ukuthi ngingenza i-carb kuqala bese ngiphinde ngihlasele ukuvuza. Bese uthinta ikhanda lamandla,
Igesi liphuma kulo mgodi
Kuthunyelwe ngu- ttravis Ngo-Sat, 07 / 01 / 2017 - 02: 37
Ekuphenduleni I-Powerhead ne-carb by Jwb.jw17
Ayikho induku yokushintsha phezu ...
Ayikho induku yokushintsha ku-3 HP njengokunye ku-5.5 nakwezinye izinhlobo ezihambayo.
Kuthunyelwe ngu- Jwb.jw17 NgoThu, 06 / 29 / 2017 - 22: 57
Kuthunyelwe ngu- Jwb.jw17 NgoThu, 06 / 29 / 2017 - 23: 00
Kuthunyelwe ngu- Jwb.jw17 NgoThu, 06 / 29 / 2017 - 23: 08
Ngiyazisa kakhulu ukuthi uthatha isikhathi sokungisiza njengale ... Ngiyayithanda le injini encane nje kuphela iminyaka engu-10 encane kunami futhi ihambisana nesikebhe sami se-14 sokhuni olukhuni ngokwanele .Ngizokugcina ngokuthunyelwe ... Nginezinto eziningi kakhulu ku-burner okwamanje. UJeremy
Kuthunyelwe ngu- Jwb.jw17 ku Fri, 06 / 30 / 2017 - 21: 24
I-tank yamagesi kanye ne-valve
Njengoba ngangiqagele ukuthi ukuvalwa kwama-valve kuvaliwe, ngakhipha ithangi ngafaka kabusha i-valve futhi ngabamba imimoya yamaminerali ukuyigeza. Ngiyayivumela ukuthi ihlale ivuleke ivuleke futhi yaputshuka futhi lapho kuvalwa umoya ibisenza kodwa ngokulambisa. Ngokumangazayo kuphume intwana encane yokugqwala / ukungcola futhi lezi zingxenye ezimbili zokuphepha kwekepisi .umuntu kumele azikhiphe kudala futhi yingakho umgudu ungavali ngokuphelele ..
Ukuphepha kwegesi yamagesi
Kuthunyelwe ngu- Jwb.jw17 ku Fri, 06 / 30 / 2017 - 21: 58
Ku-5.5 HP yakho wayenexhumano ukuze ususe. Angiboni noma yini kulokhu futhi kukhona izikrini ze-5 kuphela. Kukhona i-plate encane nje ngenhla yomswakama engingakususi okwamanje.
Kuthunyelwe ngu- Jwb.jw17 ku Fri, 06 / 30 / 2017 - 22: 01
Inhloko yamandla ngakolunye uhlangothi
Izikulufu ezi-2 ohlangothini ngalunye nolunye ekugcineni
Kuthunyelwe ngu- ttravis Ngo-Sat, 07 / 01 / 2017 - 02: 39
Ekuphenduleni Inhloko yamandla ngakolunye uhlangothi by Jwb.jw17
Ngangiqhaqhaza futhi ngiyeke ...
Ngangizidabula ngifake izintambo zokuxhuma ezintsha. Ngithole eyami kwaTrektor Supply. Ngingakuthumela isixhumanisi kusasa lapho sengiphapheme ngokwengeziwe. Gcina izintambo ezindala ukukala ubude bazo.
Kuthunyelwe ngu- ttravis Ngo-Sat, 07 / 01 / 2017 - 06: 57
Ekuphenduleni Ngangiqhaqhaza futhi ngiyeke ... by ttravis
http://outboard-boat-motor-repair.com/parts/18-5225%20Spark%20Plug%20Wi… Noma sebenzisa usesho lwesayithi uphinde uxhume ku-"18-5225"
Kuthunyelwe ngu- Jwb.jw17 Ngo-Sat, 07 / 01 / 2017 - 13: 37
Kulungile imizwa yami kahle. Ngizoqhubeka nokukhipha ikhanda lamandla bese ngiya ekulandiseni izingxenye ... Ngizobuyela emuva uma ngidinga usizo .. ngiyabonga futhi!
Kuthunyelwe ngu- Jwb.jw17 ku Fri, 06 / 30 / 2017 - 22: 16
I-Spark wire wires
Bheka lokhu !! umuntu othile wakha lokhu (igiya elishisayo) ngothayi bezintambo kanye nocingo olulodwa lwepayipi futhi ngubani owaziyo ukuthi yini enye, lapho isiya endaweni esheshayo izintambo zicindezelwa phakathi ngoba isibani esikhulu kangaka senziwa ngezinto zokwakha. ube eseyigcoba ngakho iyahamba. Ungenzenjani ? Ngifuna ukuyidabula ngiqhamuke nokuthile okungcono.
Misa isikhundla n
Kuthunyelwe ngu- Jwb.jw17 ku Fri, 06 / 30 / 2017 - 22: 18
Kuthunyelwe ngu- Jwb.jw17 ku Fri, 06 / 30 / 2017 - 22: 20
Kuthunyelwe ngu- Jwb.jw17 NgoThu, 07 / 06 / 2017 - 14: 43
Le ndawo ye-3 / 4 inch ngaphansi kwayo yonke into. Kuya phansi kumhlophe hhayi ngethusi
Isitoreji esusiwe ...
Kuthunyelwe ngu- Jwb.jw17 NgoThu, 07 / 06 / 2017 - 14: 48
I-cylinder ephezulu ye-60lbs, ephansi yi-50. uzokhipha ikhanda futhi uhlole / ufake indawo ye-gasket futhi uvuse uma kudingeka. Ingabe izindandatho zisatholakala kule injini?
Kuthunyelwe ngu- Jwb.jw17 ku Fri, 08 / 04 / 2017 - 10: 40
Ekuphenduleni Ukuhlolwa kokucindezela by Jwb.jw17
Iphrojekthi ye-Jw 17
Sawubona Travis, ekugcineni ngithole isikhathi sokusebenza ngalokhu futhi .. Ngakhe kabusha i-case gear ephansi ... Kwangithatha amahora we-3 ukumba uphawu oludala! Empeleni ngaqala ukuzisola ukukhipha ngoba kwakungenamanzi emafutheni webhokisi lamagesi. Noma kunjalo uphawu olusha nokushayela okusha kuyakhona. Ngidinga i-permatex gasket seal inhloko yamandla emzimbeni ophansi? Futhi i-gasket yekhanda, Kulungile ukuvumela lokhu futhi? Angikaze ngenze injini yasolwandle noma i-2 isifo ngakho ngicela kuqala. Siyabonga
Kuthunyelwe ngu- ttravis ku Fri, 08 / 04 / 2017 - 11: 56
Ekuphenduleni Iphrojekthi ye-Jw 17 by Jwb.jw17
Beka i-permatex yakho kude! Wena…
Beka i-permatex yakho kude! Awudingi ukuthi unamathisele ikhanda lamandla emzimbeni, noma i-gasket yekhanda.
Ngiyajabula ukuzwa ukuthi uthuthuka. Uzoba yingcweti uma usuqedile.
Kuthunyelwe ngu- Jwb.jw17 Ngo-Sat, 08 / 05 / 2017 - 10: 50
Ekuphenduleni Beka i-permatex yakho kude! Wena… by ttravis
Kulungile ngiyabonga, ngizovele ngenze umsebenzi omuhle wokuhlanza kubo. Ikhithi yami ye-carb kufanele ibe lapha kungekudala .. Ngicabanga ukuthi uphawu lwaluyinto yokuqala, lwalunombala wethusi, futhi lushiselwe ngokoqobo ngemuva kweminyaka engama-55 !! Ngizohamba nokucindezelwa kwamanje okungu-50 no-60 futhi ngethemba ukuthi kuzothuthuka lapho ngibuhlanganisa ndawonye .I-head gasket, yize yayikulungele ukushintsha futhi ngiyethemba ukuthi ukwelashwa kwe-Marvel Mystery Oil kuthuthukisa ikhono lokuvala izindandatho . Bengine-31 Model A Pickup ebinekhanda eliqhekekile futhi amanzi aqeda wonke ama-piston amane asendaweni. Ngisuse ikhanda ngagcwalisa amasilinda ngeMMO. Ngemuva kwe-werk ngafaka i-handcrank ngaphakathi ngathatha i-4 sledge sledge futhi ngaqala ukuzama ukushaya i-crank ngapha nangapha futhi ngithuthe izinto. Ngosuku lokuqala yahamba amasentimitha ambalwa futhi nsuku zonke yadlula kancane futhi ekugcineni yajika ngokuphelele .Mayelana nezinyanga ezi-8 kamuva ngakwazi ukuyibeka crank ngashaya enye ikhanda kuyo, ngayibeka isikhathi futhi yaqala ngqo !!! Ukumangalisa nobufakazi bokuqina kweModeli A neMMO. Ngiyabonga Tom, ngizokwazisa ukuthi kwenzeka kanjani.
Kuthunyelwe ngu- Jwb.jw17 Ngo-Sat, 08 / 05 / 2017 - 22: 36
Ekuphenduleni Siyabonga by Jwb.jw17
Ekuhambeni kwephrojekthi ye-JW17
Sawubona Tom, Namuhla ntambama cishe abayi-5 bangene esitolo sami bezosebenza. Ikhithi ye-carb yeza ngeposi. Ivelufa yenaliti yakudala yayingenaso isiqeshana nethiphu lensimbi kunerabha .. nganginaso isikhathi sokuthola isiqeshana sisebenze ngagcina ngiyigoba kancane ngasifaka. Ngicabanga ukuthi inhloso yayo ukuqinisekisa ukuthi inaliti iyehla kanye neflothi. I-valve yasekuqaleni yayingenayo i-groove ngaphezulu ... Ngakho-ke isibambi selangabi ne-carb kuvuliwe, kufakwe ikhanda, nekhanda lamandla libuyele emzimbeni ophansi. Incwadi ye-Evinrude esizeni sakho ithi ukubeka injini ohlangothini lwayo ukugcwalisa ikesi legiye. Ngenze njalo ... Umbuzo ... ?? Ngabe kufanele ngiyilungise iqonde bese ngikhipha ipulagi ephezulu ukwehlisa izinga emgodini noma kuzolunga njengoba kunjalo? Ngiyigcwalisile ukuze ichichime endaweni evundlile .Ngisenezintambo ze-plug engizobhekana nazo. Ngidinga futhi ukwenza olunye uvivinyo lwe-valve valve leak ngaphambi kokufaka i-tank ne-valve ... ngithole ingcosana ye-gunk ku-valve futhi ngiyethemba ukuthi izovalwa manje..Uke wawuthola umthombo omusha we-valve?
Kuthunyelwe ngu- ttravis Ku-Sun, 08 / 06 / 2017 - 12: 22
Ekuphenduleni Ekuhambeni kwephrojekthi ye-JW17 by Jwb.jw17
NJENGOBA kude namafutha ephansi ekugcineni ...
NJENGOBA ukuhamba kwamafutha okugcina okuphansi, ngivame ukufaka amafutha ephasinini eliphezulu, ngenawo moto endaweni lapho uqala ukuphuma.
Kubukeka sengathi ngibone uphethiloli uvala ama-valve ku-eBay, kepha angisebenzi ku-3 HP yami isikhashana. Ngicabanga ukuthi lokhu kungcezu lwamapayipi wethusi olujwayelekile olungu-1/4 intshi. Ngenze ukusesha okulandelayo ku I-Amazon ukubona ukuthi kukhona yini okuzosebenza.
Kuthunyelwe ngu- Jwb.jw17 Ngo-Tue, 08 / 08 / 2017 - 10: 42
Ekuphenduleni NJENGOBA kude namafutha ephansi ekugcineni ... by ttravis
Yebo ngiyitholile ebay. $ 55 !!!! Isikhangiso sasibhalwe ngesiRashiya ngakho-ke nginenkinga ngaso futhi angifuni ukukhokha imali engama-55. Amafutha akhanywa ukugcwalisa imbobo. Ngiya edolobheni namuhla esitolo sehadiwe esinakho konke engake ngakudinga ... Lesi kungaba yisikhathi esisodwa abangasitholi.
Kuthunyelwe ngu- I-PatsRG8. NgoThu, 08 / 03 / 2017 - 10: 30
Ukuguqulwa kwe-tank 1956 Johnson
Sawubona- Ngisanda kuqeda iphrojekthi yokuguqula amathangi ku-1956 5.5hp yami. Ngibhekene nezingqinamba ngolayini kaphethiloli / ulayini wokuhlanza ofanele. Ungangitshela ukuthi usayizi ofanele owusebenzisayo, ngidinga ukuwondla ngengalo ye-tiller futhi ipayipi enginalo likhulu.
Kuthunyelwe ngu- ttravis NgoThu, 08 / 03 / 2017 - 11: 22
Ekuphenduleni Ukuguqulwa kwe-tank 1956 Johnson by I-PatsRG8.
Ilayini lombuso elisetshenziswe ngu ...
Ulayini kaphethiloli osetshenziswe nguJohnson / Evinrude ungaba wu-3/8 noma 5/16 intshi ngaphakathi ububanzi (ID). Kungumugqa nje kaphethiloli ojwayelekile ongawuthola kunoma yisiphi isitolo sezingxenye zezimoto.
Nasi isixhumanisi lapho ungathola khona i-5 / 16 ID 5 umugqa onyawo ku-Amazon.com
Nasi isixhumanisi se-1 / 4 ID ye-inch ID 5 umzila wonyawo:
Kuthunyelwe ngu- I-PatsRG8. NgoThu, 08 / 03 / 2017 - 12: 02
Ekuphenduleni Ilayini lombuso elisetshenziswe ngu ... by ttravis
Ngiyabonga. Ngithengile okungu-1/4 kepha angikwazi ukukuhambisa ngophahla olungezansi lapho bekukhona khona uhlelo lwemigqa emibili. Kubukeka sengathi ulayini owusebenzise kusayithi muhle kakhulu ukuthi ukhuphukele kanjani engalweni ye-tiller?
Kuthunyelwe ngu- I-PatsRG8. NgoThu, 08 / 03 / 2017 - 12: 06
Ekuphenduleni I-fuel line by I-PatsRG8.
Kuthunyelwe ngu- ttravis NgoThu, 08 / 03 / 2017 - 22: 14
Ekuphenduleni Ngezansi kwenkomo by I-PatsRG8.
Kuphrojekthi yami, ngishintshe isixhumi sikaphethiloli sesibili ngafaka isixhumi sikaphethiloli esisodwa kukhava yemoto. Angizange ngilisebenzise ipayipi likaphethiloli uqobo lwalo ngidabule noma ngaphansi kwesembozo semoto.
Angikutholanga lokhu ku-Amazon.com, noma kunjalo, banakho okunye ku-eBay. Cinga
"Isixhumi se-393334 fuel"
Kuthunyelwe ngu- I-newt6522 Ku-Sun, 08 / 13 / 2017 - 17: 19
Nginamandla we-1956 qd-17 10 amahhashi angitholi uphethiloli. Ngine-spark futhi ngithola uphethiloli ku-sedb bulb kepha yilokho kuphela engikudonse i-carb futhi ama-jets ahlanzekile. noma iziphi iziphakamiso
Kuthunyelwe ngu- ttravis Ku-Mon, 08 / 14 / 2017 - 00: 24
Siyabonga ngokuvakasha. Wena…
Siyabonga ngokuvakasha. Unombuzo omuhle.
Vala i-carb off, beka isithupha sakho noma intende yesandla phezu kokuphakelwa kokungenisa bese udonsa intambo yokuqala. Kufanele ukwazi ukuzizwa umdonsela ngaleso sikhathi. Uma kungenjalo, hlola ama-valve omhlanga. Uma ukwazi ukuzwa ukuncela emanefold, qiniseka ukuthi ama-carb gaskets akho aqinile emoyeni. Ilikhi elincane kakhulu lifana nesikhonkwane esikhonkosini. Kuzokwenza ukuthi i-carb ingadonsi kuphethiloli nomoya. Qiniseka ukuthi une-new I-Carb Kit lapho uhlanganisa i-carb. Futhi ungahle uthande ukubheka i-valve yenaliti yokuntanta.
Kuthunyelwe ngu- Ama-Timreimens Ku-Mon, 08 / 14 / 2017 - 22: 46
Ngiyabonga Tom ngalo lonke ulwazi oluhle lokuvuselela i-3hp outboard. Ngathenga imoto yami yokuqala yesikebhe, i-Evinrude 1964hp Yachtwin yango-3 nge $ 60 eyayidinga ukulungiswa ngokuphelele. Ngenhlanhla i-carburetor yayinakekelwe, kepha yayidinga okunye ukunakwa. Amaphuzu ne-condenser kwakubonakala kukuhle kodwa amakhoyili ayemabi njengoba kunjalo nangezintambo ze-plug. Isembozo sekhanda lesilinda sasinegebe eligqwalile laya ngejakhethi yamanzi futhi ipuleti lekhava yokukhipha yayinezimbobo eziningana ezidliwe, kodwa ikesi legiye lalilihle. Ngivuselele kabusha ukuthungela futhi ngakha kabusha i-carburetor futhi yaqhuma futhi isebenza kahle. Njengamanje ngi-ode impeller entsha nepuleti lekhava yokukhipha kanye ne-gasket. Angisakwazi ukulinda ukuphuma ngiyokuzama emanzini.
Ngangifuna ukudlulisa ama-link amabili e-Youtube engayithola nawo ayasiza.
(cajuncookone) Ividiyo ka-Evinrude Gale noJohnson https://www.youtube.com/watch?v=oTN8Ag_aj-8 (ama-7- 10 amaminithi amaminithi amade kodwa aphelele)
Kuthunyelwe ngu- Ingonyama Ku-Mon, 08 / 21 / 2017 - 22: 04
I-Evrinrude 3.3hp i-1941
Angicabangi ukuthi kunezingxenye ezingashintshana phakathi kwalezi zinto ezimbili. Uma i-1941 Johnson 3.3 HP isebenza, shintsha ulayini kaphethiloli futhi uyijabulele. Kuzoba nzima ukuthola izingxenye zaleyo moto endala. U-Evinrude akasayisekeli, kanti iSierra Marine ayizenzi izingxenye zama-motors ezindala. Kukhona amasayithi angaphandle okuvuna kanye ne-google lapho ungathola khona izingxenye. Benza leyo moto iminyaka eminingana.
I-1958 Johnson 3.0 HP JW-14 yakho ye-XNUMX yayiyimoto ethandwayo futhi namanje. Kukhona izingxenye eziningi ezitholakalayo. Nasi isixhumanisi esibhala izingxenye ezivamile.
Ngingasho ukuthi kufanelekile ukuzama ukulungisa nokusebenza.
Ngine-1941 evinrude 3.3hp ne-58 'johnson 3hp.
Zikhona izingxenye ezihambisanayo / eziguquguqukayo?
I-hp 3.3 igijima kodwa ukuvuza kwe-fuel line futhi i-3hp ayifuni noma igijime.
Kuthunyelwe ngu- Ingonyama ku Fri, 08 / 25 / 2017 - 10: 35
Ekuphenduleni I-Evrinrude 3.3hp i-1941 by Ingonyama
Ngizokwazisa okwenzekayo kungakhathaliseki ukuthi kungenzeka.
Kuthunyelwe ngu- Cliffjohnsen ku Fri, 08 / 25 / 2017 - 17: 04
Nginomdobi we-5.5 ...
Nginomdobi 5.5 1956. amakhoyili amasha namaphuzu konke kubukeka kukuhle. Amaphuzu abekwe phansi noma ngabe avulekile noma avaliwe. Angicabangi ukuthi lokhu kulungile. Ngocingo lwekhoyili nolwe-condensor, azisekho phansi
Noma iziphi iziphakamiso? womabili amakhoyili avivinya i-8ko ku-plug kusuka ocingweni oluhlaza. Inhlansi iphakathi nendawo.
Kuthunyelwe ngu- ttravis Ngo-Sat, 08 / 26 / 2017 - 01: 01
Ekuphenduleni Nginomdobi we-5.5 ... by Cliffjohnsen
Ukufunda okuphikisanayo ...
Yikuphi ukumelana kokufunda okutholayo kuma-condensers? Kufanele kube phezulu. Ezinye izithombe zingasiza.
Kuthunyelwe ngu- Xavier56 Ngo-Wed, 08 / 30 / 2017 - 16: 56
Johnson 5.5 Hp CD-20 - Akukho Spark
Ngine-Johnson-5.5 Hp CD-20 ene-No Spark. IBack Round ngukuthi le moto ayisebenzi futhi yaqalwa ukulungiswa omunye umuntu. Bafake Amakhoyili Amabili Amasha, amaCondensers namaPhoyinti. Ayikwazanga ukusho ukuthi ngabe zithathelwe indawo izintambo ze-Spark Plug zokuqinisekisa ukuthi amakepisi amasha, izintambo zibukeka zisesimweni esihle kakhulu. Ayikho iSpark nhlobo, ngisho inhlansi ebuthakathaka uma ubamba ipulagi bese unikeza icala. Ngikubheke yonke indawo futhi angikwazi ukuthola izingqinamba. Ngifundile u-1I-954-1964 I-Evinrude 5.5 I-HP Tune-UP Uhlelo lokugabisa uhlelo lwe-Upgrade. Ngibuke izithombe futhi ngazama ukubona ukuthi ngabe kukhona okufakiwe okungalungile. Ukuhlola kabusha i-Gap kwakungu-Ok. Angikutholi engikulahlekile. Uthathe isithombe futhi waqhathanisa nesithombe seTune up, ungaboni okuhlukile. Ngangibona eyodwa ingenayo inhlansi kodwa hhayi zombili. Noma yiluphi usizo luzokwaziswa.
Kuthunyelwe ngu- ttravis Ku-Mon, 09 / 04 / 2017 - 12: 17
Ekuphenduleni Johnson 5.5 Hp CD-20 - Akukho Spark by Xavier56
Ngingathatha imitha ye-Ohm ...
Ngangithatha imitha ye-ohm bese ngivivinya ama-condensers namakhoyili. Futhi, hlola izintambo ze-spark plug ukubona ukuthi unenkinga yokubeka phansi noma yokuxhuma.
Kuthunyelwe ngu- I-VintageRuns Ku-Mon, 09 / 04 / 2017 - 09: 59
Ukubingelela: Ngisanda kuthenga i-1965 3hp Johnson engakahlukaniswa kancane kodwa nginenkinga yokufaka kabusha ishubhu lamanzi. Kukhona "ubakaki" omncane wepulasitiki ekugcineni komhlangano wezimoto wepayipi lamanzi ... kepha angiboni ukuthi ngingawufaka kuphi lo mhlangano emhlanganweni wezimoto. Ngabe kufanele ngisuse umhlangano wezimoto kukholamu ukufaka kabusha le tube yamanzi.
Noma yisiphi iseluleko singasamukela.
Kuthunyelwe ngu- ttravis Ku-Mon, 09 / 04 / 2017 - 12: 20
Ekuphenduleni 1965 3hp Johnson by I-VintageRuns
Angizange ngisebenze ku-3 HP yami ...
Angikasebenzi ku-3 HP yami isikhashana ngakho angikhumbuli ukuthi kusebenza kanjani lokho. Ngicabanga ukuthi kunamavidiyo we-youtube laphaya angakukhombisa ukuthi ufunani, noma mhlawumbe umuntu onqenqemeni lekhanda muva nje angangena aphendule umbuzo wakho.
Kuthunyelwe ngu- mdm ku Fri, 09 / 15 / 2017 - 15: 12
Ngakha kabusha i-53 3hp Johnson. Ngabe kufanele ngisebenzise noma yini kumabhawodi ukunciphisa ukubola, njengamafutha noma i-locktite njll? Okufanayo ngamalunga kushaft engezansi?
Kuthunyelwe ngu- ttravis Ngo-Sat, 09 / 16 / 2017 - 00: 03
Ekuphenduleni 3hp johnson by mdm
Ngangihlale ngibeka ukulwa okunamanzi phezu ...
Ngihlala ngifaka ama-anti-seaze kuma-bolts, ikakhulukazi uma kunezinsimbi ezahlukahlukene ezihilelekile. Uzozibonga ngokuzayo lapho ukhipha imishudo. Okumnandi, kodwa izinto ezinhle. https://www.amazon.com/Permatex-80078-Anti-Seize-Lubricant-Bottle/dp/B0…
Kuthunyelwe ngu- 19evinridelvr58 Ngo-Wed, 10 / 04 / 2017 - 20: 24
Ngiyaxolisa ngokukubeka lokhu esidlangalaleni kepha angitholanga sixhumanisi sokuxhumana nathi. Ngizama ukulanda ibhuku labanikazi lango-1958 evinrude lightwin amathathu lapho ngichofoza ukulanda kungitshela ukuthi ngichofoze isandiso ibhokisi elincane elimnyama liqhuma umlilo ngomzuzwana bese linyamalala angikwazi ukwenza lutho ngoba angikwazi ukwenza
Ngidlule ngalokhu ... isayithi akusilo lomsebenzisi onobungane..ngakho konke
Kuthunyelwe ngu- ttravis NgoThu, 10 / 05 / 2017 - 07: 58
Ekuphenduleni Engeza isandiso by 19evinridelvr58
Siyabonga ngokuvakashela futhi mina ...
Ngiyabonga ngokuvakashela futhi ngamukela imibono ekhomba amaphutha engingakwazi ukuwalungisa futhi ngithuthukise leli sayithi. Ngisanda kuqeda ukufaka zonke izikebhe zangaphandle ezikhiqizwa u-Evinrude / Johnson / OMC / BRP futhi ngisebenza ngenkuthalo ohlwini lwezingxenye zemoto ngayinye. Kunama-tweek amaningi engifuna ukuwenza ukuthuthukisa ulwazi lomsebenzisi.
Ngizama ukuthola ukuthi ukuleliphi ikhasi uma ubona lokhu. Bengingacabangi ukuthi nginesixhumanisi sokulanda ifayela le-PDF lalelo bhukwana. ngiye http://outboard-boat-motor-repair.com/Evinrude%203%20HP%20Lightwin%20Ou… kodwa angazi ukuthi uchofoze yini.
Kungenzeka yini ukuthi lokho ochofoze kukho ukulanda ifayela empeleni bekuyisikhangiso se-google eduze phezulu kwesikrini? Nasi isithombe sesikhangiso engicabanga ukuthi singadideka. Angikwazi ukulawula okungeziwe ukuthi iGoogle iyabeka, kepha iyasiza ukukhokhela leli sayithi. Ngizobona ukuthi ngingasivimba yini leso sikhangiso ngoba ngiyavuma, siyadukisa.
Ngizobona ukuthi ngingathola yini lelo fayela le-PDF futhi ngibeke isixhumanisi kuso.
Kuthunyelwe ngu- ttravis NgoThu, 10 / 05 / 2017 - 08: 10
Ekuphenduleni Siyabonga ngokuvakashela futhi mina ... by ttravis
Ngikholelwa ukuthi ngivimbile ...
Ngikholwa ukuthi ngisivimbile leso sikhangiso. Lesi yisikhangiso sokuqala engisivimbile ngakho ngifunde okuthile okusha. Ngizobona ukuthi ngiyakwazi yini ukuthola lelo fayela le-PDF. Cishe iboshelwe endaweni ethile esizeni esidala http://old.outboard-boat-motor-repair.com
Ikhasi lamanje 1
ikhasi elilandelayo Olandelayo >
Ikhasi lokugcina Okokugcina »